Barcelona Oo Horyaalka La Liga U Dhigtay Rikoor Cusub +SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Barcelona Oo Horyaalka La Liga U Dhigtay Rikoor Cusub +SAWIRRO
Tababare Ernesto Valverde ayay tahay in lagu amaano guuldaro la’aanta ay Barcelona ku jirto waqtigaan iyo sidoo kale rikoorka ay sameysay walow mar walba Luis Enrique uu rikoorkaan dhinac kaga jiro maadama uu 7-kulan kooxda ka ilaaliyey iney guuldaro la kulanto xilli ciyaareedkii hore dhamaadkiisa.
Guul 2-1 ah oo ay ka gaareen Valencia ayaa u sahashay iney ku talaabsadaan rikoor cusub oo aan wali laga sameynin La Liga kaas oo ah 39-kulan inaan dhinacooda, meel ayey iska mariyeen rikoorkii Sociedad ay sameysay1979/80.
Kooxda ka dhisan Gobolka Catalan waxey si fajac ah uga soo hartay koobka Champions League iyagoo ku baxay gacmaha kooxda Roma, balse wali waxey fursadu heystaan laba koob oo maxali ah iney hantaan.
32-kulan oo ka mid ah wey adkaadeen, kaliya 7-jeer ayey barbaro galeen, walo aay hal jeer halis badan galeen waa markii ay Sevilla marti u noqdeen walow ay ciyaarta 2-2 ku dhameysteen markii ay goolal soo daahay ka heleen Messi iyo Suarez.
Lionel Messi ayaa ah xiddiga ugu goolasha badan inta rikoorkaan lagu dhex jiro isagoo dhaliyay 39-gool, mudadaas Balaugrana waxey dhalisay 108-gool.
Neymar Junior ayaa kooxda ka baxay, waxeyna taasi ku kaliftay Valverde inuu qaabka dhan ee kooxda u badalo 4-4-2, wuxuuna noqday nidaam kooxda ka saaciday inaan wax badan laga dhalin xilli ciyaaredkaan – sidoo kale Rakitic iyo Busquets ayaa si fiican u fahmay qaabkaan cusub.
Lionel Messi muddo ma ciyaarin hanaanka uu hadda kusoo bandhigo La Liga, dhawr jeer ayuuna kooxda natiijooyin wax ku ool ah u hogaamiyay.
Walaac badan ayaa laga qabay Barcelona iney dhaafi karto Valencia balse laba gool oo ay dhaliyeen Umititi iyo Suarez ayaa u qubeeyay wiilasha Mastella kuwaas oo marti ku ahaa Camp Nou.